Somaaliyaa Keessatti Guyyaa Lama Keessatti Sababaa Caamaan Namoota Dhibba Tokkoo Ol Tu Dhume
Bitootessa 06, 2017
Somaaliyaa keessatti sa’atilee darban 48 yokssn guyyooys lama keessatti namoonni 110 du’an jechuun mootummaan eega labsee as beelli mudachuu mala akeekkachisii jedhu caalaatti dhaga’amaa jira.
Kun Somaaliyaa keessatti caama isa duraa miti. Isa dhumaa illee waan tahu hin fakkaatu. Guyyaa lama keessatti biyyattii keessatti namoonni dhibba tokkoo fi kudhan tahan sababaa kanaan dhumuun ka Sanbata dare kana labsame kan nu hubachiisu, biyyatii keessatti garaarsi yeroo hatattamaa barbaachisuu qofa otuu hin taane, biyyattii keessatti akka rakkoon nyaataa hin jiraane taasisuuf, furmaata hojii furmaata yeroo dheeraa ka barbaachisu tahuu isaa ti.
Keeniyaa fi Itiyoophiyaan illee rakkoo caamaa kanaan akka rakkataa jiran ka dubbatan - Koree Fannoo Diimaa sadarkaa Addunyaatti, Itti-aanaa hoogganaan jila Somaaliyaa – Daani’eel Omaalii, garuu “biyyoota lamaan keessa, caasaan wal-quunnamtii uummataa ni jira” jedhu.
Hasan Nuur Saadii ammoo, Dhaabbata gargaarsa daa’immanii “Save the Children” jedhamutti, daarektara Waajira dhimma Somaaliyaa ti. Caamni Itiyoophiyaa keessaa bara dabre, lammiwwan Itiyoophiyaa gara miliyoona digdamaa miidhe. Garuu, Itiyoophiyaa keessatti tasabbii haga tokko jiru jalatti cichaan waan hojiin hojjetameef dandamachuun danda’amee ture – jedhabii, haallli Somaaliyaa keessaa akka kana irraa adda tahe dubbatu.
Ta’us garuu, Somaaliyaan marti wal-waraansa keessa jirti jechuu miti – kan jedhan immoo – Dhaabbata Mercy Corp-tti, Daaretara Afrikaa Bahaa fi Kibbaa ka tahan – Daariyees Raadklifi. Naannooleen marti kanneen Al-Shabaabiin to’ataman jechuu miti. Kaanneen tasgabbii qaban keessatti, hojii gargaarsaa hojjechuun ni danda’ama – jedhu. Dhaabbatoonni gargaarsaa sadeenuu, Somaaliyaa keessatti hojii gargaarsaatti bobba’anii jiran.
Ol Iyyaannaan Jara Zoon 9 Ammas Yeroo Biraatti Dabarfame
Ministriin Dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Gabaasa Mirga Dhala Namaa Haaraa Baase
Mootummaan Keniyaa Bilbila Harkaa To’achuu Fedha
Bilbilli Koo Akka Dhoksaan Dhaggeeffatamuuf Obaamaatu Ajaje: Prez. Traamp
Prezidaant Traamp Seera Haaraa Mallatteessan
Turtii Antropolojisti Boonnii Holkoom (Qabbanee Waaqoo) Wajjin